Taliyaha booliiska oo tababar u soo xirey saraakiil-Sawirro – Radio Muqdisho
Taliyaha booliiska oo tababar u soo xirey saraakiil-Sawirro
Taliyaha Ciidanka Booliiska soomaaliyeed Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa Maanta tababar muddo soconayay ugu soo xiray qaar ka mid ah saraakiisha booliiska Xerada Gaadiidka.
Taliyaha waxa uu aad u ammaanay doorka ay ciidanka Booliiska ka qaataan Sugidda ammaanka Qaranka, taasina lagu fuliyay hadba tababarada ay qaataan, wuxuuna tilmaamay in waxyaabihii ay halkaan ka barteen ay ku dabakhaan hawlaha ay shacabka u hayaan.
Dhanka kale Taliyaha ciidanka Booliska soomaaliyeed ayaa maanta kormeer ku tegay goobaha ay ka socoto mushaar bixinta Ciidanka booliiska soomaaliyeed.
Ugu horeen waxaa mushaar bixinta lagu bilabay taliyaha Ciidanka booliska, waxuuna ammaanay qaabka ay u socoto lacag bixinta ciidanka.
“Waad u jeedaan aniga ayaa laygu bilaabay lacagta mushaarka oo ah seddex bilood, wayna soconaysaa inta ay ka qaadanayaan Ciidanka dhan midka heeganka ah iyo kuwa xafiisyada joogaba,aad ayaana u amanayaa saraakiisha ku howlan mushaar bixinta”sidaasi waxaa yiri taliyaha Ciidanka booliiska Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud .
Taliska Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa wada dadaalo lagu tayaynayo Ciidanka,isla markaana kor loogu qaadayo aqoontooda.
Doorka haweenka ee siyaasadda dalka oo laga hadlay “SAWIRRO”
QM oo sheegtay in ay korortay tirada qaxootiga adduunka